Gabadhii uu guursan lahaa Weriye Jamaal Khasoqji oo halkii lagu dilay hadal qiiro leh ka sheegtay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Gabadhii uu guursan lahaa Weriye Jamaal Khasoqji oo halkii lagu dilay hadal...
Gabadhii uu guursan lahaa Weriye Jamaal Khasoqji oo halkii lagu dilay hadal qiiro leh ka sheegtay!
Istanbul (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Istanbul loogu qabtay Munaasabad Duco weriyihii Sucuudiga u dhashay Jamaal Khaashuqji, kaasoo sanad ka hor lagu dilay dalka Turkiga.
Khashoqji ayaa ahaa weriye dhaliila dowladda Sucuudi Carabiya ayaa howlwadeenno Sucuudi ah, waxa ay ku dhex dileen qunsuliyadda boqortooyada ee magaaladaasi Turkiga ku taal.
Haweeneyda u doonnaneyd Hatice Cengiz ayaa waxa ay munaasabadda ducada ay ka sheegtay inay weli cadaalad doonayso, Waxayna xustay inay Weli Jeceshahay Jamaal oo Qalbigeeda aanu ka bixin.
Dhawaan Dhaxal Sugaha Sucuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu iska fogeeyay inuu wax lug ah ku lahaa dilka, hasa yeeshee khubaro ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku baaqeen in ninkaasi la baaro.
Warbixin ay soo saareen bishii Juun ayey khubaradu dilkaasi ku tilmaameen ‘mid sharci darra ah oo laga sii shaqeeyay”.
Dacwad oogayaasha Sucuudiga ayaa waxa ay dacwad ku soo oogeen 11 qof oo ay sheegeen inay ku lug lahaayeen “howlgalka arxandarra ah” ee sababay dhimashada Khaashuqji.
Hasayeeshee hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay sheegaysaa in maxkamadeynta aanay gaarsiisnayn heerarka caalamiga ah iyo in mas’uuliyiinta Sucuudiga ay “hor istaageen isla xisaabtanka dhabta ah”.
Safaarada Sacuudiga ee Turkiga
Weriye Jamaal Khasoqji